Tafiditra Ao Amin'ireo Anjerimanontolo Rosiana Ankehitriny Ve Ny Hetsika Tamin'ny 1968?	Voadika ny 04 Febroary 2013 13:13 GMT
Zarao: Ny volana lasa teo, ny 18 Desambra, nanomboka nanao fitokonana sy nanakana ny fidirana amin'ny varavaramben'ny Anjerimanontolo ny mpianatra ao amin'ny Anjerimanontolom-panjakana Rosiana momba ny varotra sy toekarena [ru] (RSUTE) . Ny fifandroritan-kevitra dia mikasika an'i Sergei Baburin, rektoran'ny Oniversite, izay nesorina tamin'ny asany vao tsy ela akory ary nifangaroan'ny asa naha tompon'andraikitra azy tao amin'ny akademia tamin'ireo tantaran'ny lavabe naha mpanao politika azy. Ny Desambra 2011, lasa mpitarika ny fiombonana politika vaovao izy: Sendikà Nasionaly Rosiana, fikambanana Nasionalista iray mikendry ny hifaninana amin'ny “Antokon'ny Fitondrana,” Rosia Miray. Ny 4 Novambra 2012, nandray anjara tamin'ny filaharana lehibe nataon'ireo Nasionalista i Baburin sy ireo mpiara-dia aminy tamin'ny fankalazana ny Andron'ny Firaisankina tao Maosko, ary nomen'ireo mpikarakara voninahitra manokana izy tamin'izany.
Zarao: twitter facebook reddit googleplusEmail endriny atao pirinty MpanoratraYulia Lukashina
Anisan'ny RuNet Echo, tetikasan'ny Global Voices handikana ny teny Rosiana an'aterineto ity lahatsoratra ity. Lahatsoratra rehetra · MpanoratraYulia Lukashina